Lo mdlalo "Minecraft" athwala e abadlali bakhe emhlabeni bonke ubudala, babanike amathuba angenamkhawulo ukushintsha izwe umdlalo, kusukela ekwakhiweni yendlu a Redesign okuphelele landscape emhlabeni - kuyoba isikhathi isifiso. Into kuphela okukhathaza kule game, kungcono ukuthungwa eliphansi. izwe Cubic kakade eyinqaba, kanjalo icindezele ihluzo zayo abanikazi enamandla amageyimu PC. Ikakhulukazi labo abafuna diversify isithombe umdlalo, ukubheka kanjani ukufaka ukwakheka e "Minecraft".
Isinyathelo sokuqala ukuba uthole iphakethe oyifunayo nge ukwakheka. Them in inqwaba ingatholakala izinkundla anikezelwe umdlalo. Kusukela elula kuya HD high-resolution ukwakheka. Endabeni HD ukwakheka kumele amise futhi ugijime lwemibhalo impande ngohlelo umdlalo kusuka "MCpatcher", ukugwema yizembe ku kudeskithophu. Uma ukuthungwa isiphakamiso esivamile (32 no-64 Amaphikseli) ekhethiwe nguwe, akukho senzo lutholakala.
Emva ukulanda ifayela, kuhlole malware phambi ukuthungwa isethi. Ngo "Minecraft" ngaphansi ngokwezifiso ukuthungwa amaphakethe yabelwe kwifolda ehlukile, futhi udinga ukuthola. Okuzenzakalelayo isikhwama esingumsuka umdlalo itholakala ku: C: \_ Umsebenzisi \_ AppData \_ Iyazulazula \_ .minecraft. Ngokuvamile, le folda sifihliwe, ngakho bakuthola kulula uthayiphe search ".minecraft" - kusukela iphuzu phambi igama kuphela ukuthola ukuthi singabantwana ifolda nesithakazelo. Ngokulandelayo, ufuna ifolda "texturepacks" futhi-ke ukukhipha amafayela ukulandwa.
Ngemva ukukopishela amafayela, ukusebenzisa "Minecraft". Ukubeka ukuthungwa iphela imidlalo ekhethiwe inketho "Ukucolisakala amaphakethe" kwimenyu enkulu futhi inqunywa isethi oyifunayo. Ngemva kwalokho, umdlalo zingayeka okwesikhashana ephendula - kanjalo kufana textures ukufakwa e "Minecraft" kwimodi ejwayelekile, kanye ukukhathazeka imayelana. Okulandelayo, qala umdlalo bese uhlole operation kahle nomklamo omusha.
Uma uye ungazethembi lapho esebenzelana nama-computer futhi akazange ngempela ukuqonda kusukela indlela ngenhla echazwe, ungazibekela kanjani imigomo ukwakheka "Minecraft" ke kukhona kukho elula ukuthola ifolda lapho ukukopisha amafayela alandiwe.
Kudingeka ukuthi uqale umdlalo kanye kwimenyu enkulu (kwesikrini kuqala nge izinkinobho), khetha "ukuthungwa amaphakethe \_ ukuthungwa amaphakethe". Okulandelayo uzobona iwindi eliqukethe ukuthungwa amasethi (ngokwakhona kukhona okukodwa kuphela ukulanda iklayenti). inkinobho itholakala ezansi kwesikrini "ukubonisa ukwakheka ifolda" - chofoza kukho. Umdlalo ngokuzenzakalela ozosigingqela kuthreyi uzobona Windows Explorer ukuvula ifolda ukwakheka. Kuyinto kule folda, futhi ufuna ukuze uthumele amafayela amasha.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokufaka ukwakheka e "Minecraft", awukwazi kuphela ukushintsha ezungezile nawe kule game, kodwa babuye basinikeze ukubukeka esiyingqayizivele. Umkhawulo kuphela ukufakwa ukwakheka - ku-PC yakho: ayanda isinqumo, aba maningi umthwalo. Yiqiniso, "ka-Minecraft" kude izimfuneko imidlalo yesimanje, kodwa ngezinye okusezingeni eliphezulu izilungiselelo ihluzo, HD ukuthungwa, uthi amaphikseli angu-512x512, esikhundleni kwenkundla photorealistic 'kunganika "kuwe drawdown FPS izikhathi eziningana. Qaphela bese ukhetha lezo ukwakheka ngawo kukhompyutha yakho angakwazi ukusingatha ngaphandle umhlatshelo ukusebenza.
Indlela ukususa ngokuphelele "Maynkraft" ukuze "ikhompyutha". Imiyalelo.
Izinhlobonhlobo UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki apula Pink Pearl
Oredezh - umfula e Leningrad Region. Nemingenela nezici ezindawo ka ukugeleza kwamanzi. Ezokudoba nezokuvakasha emfuleni
Ihhotela Orion Hotel Rhodes 3 * (Greece / Rhodes): incazelo kanye nokubuyekeza